Home Wararka Is barbardhigga Seddex Bilood kadib Dhamaadka Muddo Xileedka MW HSM 2016 iyo...
Is barbardhigga Seddex Bilood kadib Dhamaadka Muddo Xileedka MW HSM 2016 iyo Farmajo 2017.
Maanta waxaa laga joogaa 88 maalmood kadib markiimuddo xileedku ka dhmamaaday M.Farmajo Ma naqaanno maalinta aan doorasho galeyno iyo inaan aadeyno doorasho waana nasiib xumo weyn oo nagu habsatay. Bal aynu dib u milicsanno 88 maalmood Kadib markii uu xilka ka dhamaaday MW hore Xasan Sheekh Maxamud halkee ayey wax marayeen maxaasa u qabsanaa dalka? Maantasa Maxaa noo qabsan?
Ma jiro ilaa iyo hadda hannaan doorasho oo heshiis lagu yahay laakiin Xilligii HSM waqtigan oo kale dhammaan xildhibaannada labada gole si nabad ah oo heshiis lagu yahay ayaa lagu doortay.
Waxaa kala qaybsan dowlad goboleedyadii, siyaasiyiintii, beelahii, ciidankii laakiin Xilligan oo kale waqtigii HSM, waxaa socotay hambalyadii iyo farxaddii dadkii loo doortay Barlamaankawaxaa magaalada Muqdisho ku soo qulqulayay wafuud caalami ah, saxafiyiin, madaxda dowladgoboleedyada oo soo dhammeyay howlahii doorshayiinka.
Maanta waxaa magaalada Muqdisho ka dhacaysa xabbad nool oo hooyooyinka iyo caruurta dileysa, waxaa ka qodan dhufaysyo, waxaa la mari la’yahay jidka Maka Almukarama, waxaa qaaliyoobay hubkii, waxaa qaxay ku dhawaad boqol kun oo qof. Laakiin Xilligan oo kale 2016dii waxaa shidnaa hoteelada, waxaa doodo ka socdeen TV-yada iyo raadiyaasha, waxaa magaalada ku xardhanaa boorarka murashaxiinta oo uu ka mid yahay M.Farmajo.
Beesha caalamka waxay quus ka gaartay in la qabto doorasho xor ah inta uu Farmaajo talada wax ku leeyahay, waxaa Muqdisho dhex fadhiya ergayga Qadar oo qof qof iyo koox ula kulmaya Soomaalida, sidii inaanay lahaynba dowlad, waxaa la soo magacaabayaa ergayga midowga Afrika oo leh awood u dhiganta tan ergayga qaramada midoobay, lana siiyey awood ah inuu adeegsado ciidanka Amisom, waxay safiirrada caalamka ka welwelaan sidee baanu dagaalka uga joojinaa Soomaaliya. Laakiin Xilligan o kale 2016 waxaa socotay bogaadinta loo jeedinayay madaxda dowlad goboleedyada inay soo dhammaystireen qabashada doorashooyinka, wax welwel ahna kama jirin hannaanka doorasho dadkun aad ayey u faraxsanayeen iyadoo magaalooyinka noloshooda, gaar ahaan Xamar oo hadda dhibaateysan ay ahayd goob ganacsigu aad isu dhaafayey, dalkana intiisa badan dhulka loogu kala safrayey.
Warbaahinta caalamka ugu waaweyn sida New york times, Economist, Guardian, Aljazeera ayaa ku farayaraysata gaboodfalka iyo taariikh xumada madaxweynahii xilka ka dhammaaday, oo loo haysto dacwooyin ka socda dalka Maraykanka., waxaana intaas la soo fagayaa ruuxa dhabta ee uu yahay, taas oo dhawaceysa dalka guud ahaan.
Halkaasn hoose waxaa la socda lifaaqyo caddeynaya waxa aan ka warrameyno iyo halka ay wax joogeen iyadoo dad badan oo maanta ay dhakafaarsan yihiin ayaa waxaad xigashooynkan hoose ka heleysaa iyagoo gows dabmeedkooda la arkayo qosol iyo farxad darted maantana murugu la aamusan.
(4) Wakiil | Facebook
On December 10 news: http://doorashada2016.so/en/war-saxaafadeed-10-diseembar-2016/
Election results -> http://doorashada2016.so/en/results/
Tahir waa gulaystay – https://twitter.com/doorashada2016/status/815474580496248832?s=20
Fowzia waa guulaysatay https://twitter.com/doorashada2016/status/815473591600971776?s=20
Swearing ceremony – https://twitter.com/doorashada2016/status/814035437836587008?s=20
December 10, 2016 – https://twitter.com/doorashada2016/status/807485171444236289?s=20
This news was posted Wakiil twitter on November 29, 2016 https://twitter.com/wakiilorg/status/803560240675307521?s=20